Robocop: Magaalada Rogue miyay tahay ciyaar xor ah in la ciyaaro? Ma la sii deyn doonaa 2023? - Ciyaaraha
Robocop: Magaalada Rogue miyay tahay ciyaar xor ah in la ciyaaro? Ma la sii deyn doonaa 2023?
Robocop wuxuu helayaa ciyaar cusub!
Robocop: Rogue City Trailer
Ciyaar kombuyuutar cusub oo RoboCop ah ayaa ku jirta wax soo saar waxaana la sii dayn doonaa 2023, sida uu sheegay daabacaha Nacon, kaas oo ku dhawaaqay intii lagu jiray barnaamij toos ah oo loogu magac daray Nacon Connect Talaadadii.
Toogashada qof-koowaad, cinwaankeeduna yahay RoboCop: Rogue City, wuxuu dhigayaa ciyaartoyga dhammaan sanaaciga jirka ee Alex Murphy, ama RoboCop, wuxuuna u diri doonaa si ay u difaacaan magaalada Detroit.
Inta soo hartay macluumaadka ku saabsan RoboCop: Magaalada Rogue waxaa ku hoos hayay Nacon iyo horumariye Teyon, marka laga reebo xaqiiqda ah in lagu sii deyn doono dhowr sano gudahood PC iyo tiro aan la cayimin oo consoles ah.
Sida laga soo xigtay war-saxaafadeed ka soo baxay Nacon, Rogue City waxay ku dari doontaa sheeko asal ah oo lagu dejiyay caalamka franchise's.
Iyadoo lala kaashanayo istuudiyaha MGM, daabacaha iyo horumariyuhu waxay higsanayaan inay abuuraan khibrad ciyaar RoboCop oo dhab ah oo daacad u ah DNA-da franchise-ka, sida uu qabo Nacon.
Xaqiiqda ah in Teyon uu keenay geesiyaal waxqabad laga soo bilaabo 1980-meeyadii ilaa ciyaaraha fiidiyowga ayaa markhaati u ah awoodiisa. Terminator: Iska caabin, toogte 2019 oo ku salaysan hantida Terminator-ka oo aan ahayn waxa ugu xumaa abid, iyo Rambo: Ciyaarta Fiidiyowga, 2014 tareen toogte oo ahaa, si khafiif ah, halkii laga naxo, waa laba ka mid ah kuwa ugu wanaagsan istuudiyaha -mashruuc la yaqaan.
Filimka RoboCop: Rogue City ayaa soo jeedinaysa in filimku uu noqon doono mid la mid ah miisaaniyad hoose oo laga yaabo inuu yara jahan yahay, laakiin weli awood ayuu leeyahay.
RoboCop waxa ay soo martay wakhti adag ka dhigista warshadaha ciyaaraha fiidyaha. Marka laga reebo laqabsiga 1988-kii ee filimka ay samaysay Bariga Data, Murphy wuxuu si weyn uga soo muuqday ciyaaraha konsole-ka hoose iyo ciyaaraha mobilada ee bilaashka ah (iyo sidoo kale hal Mortal Kombat) intii lagu jiray dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Halista soo socota ee Robo, aan rajayno in Nacon (oo hore loo yiqiin Bigben Interactive) iyo Teyon ay awood u yeelan doonaan inay wax u beddelaan isaga.
Sida wararka sheegayaan goos gooska tooska ah ee RoboCop ayaa la waday filim sameeye Neill Blomkamp oo mashruucan isaga baxay wax yar kadib markii lagu dhawaaqay.
Taasi waa Dhammaan ku saabsan RoboCop: Magaalada Rogue. Lasoco Wixii Kasoo Kordha Oo Ku Xidhnow Boggeena Wixii Warar Ah Ee Kasoo Kordha Waad ku mahadsan tahay akhrinta!
Daawo Trailer Gameplay-ka Cusub ee Mashruuca Ferocious Ciyaar Action Dinosaur heer sare ah oo uu dhisayo Dev Keli ah!
Beenta P Ma tahay Jawaabta su'aasha 'kawaran haddii Fromsoftware la dhisay Pinocchio?'
Roguebook: Ugu dambeyntii waxaa loo bilaabay PlayStation, Xbox iyo nooca beddelka oo dhawaan imanaya!
Waligay Waligay Waligay Xiliga 3aad Taariikhda Siidaynta: Taxanahan Miyuu Yimaa 2022?
Dilka fasalka 3: Ma la xaqiijiyay mise waa la joojiyay?
playstation 4 furayaasha psn ee bilaashka ah
sida loo helo hulu oo leh arday spotify ah
daawo 5 ilaa 7 filim online bilaash ah
daawato filimada lacag la’aan adigoon is qorin
Goobaha qulqulka anime ee bilaashka ah oo ingiriisi loogu magac daray
filimada bilaashka ah ma laha saxiixyo